Ciidamada Dowlada oo bilaabay in ay baaraan Gaadiidka AMISOM iyo sababta ka dambeysa oo la ogaaday | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Ciidamada Dowlada oo bilaabay in ay baaraan Gaadiidka AMISOM iyo sababta ka...
Ciidamada Dowlada oo bilaabay in ay baaraan Gaadiidka AMISOM iyo sababta ka dambeysa oo la ogaaday
Ciidamada Dowlada ee ku sugan Koontaroolada laga galo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya iyo garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa bilaabay in ay baaraan Gaadiidka Ciidamada AMISOM ee halkaasi maraya.
Ciidamada Dowlada ayaa gaadiidka AMISOM istaajinaya iyaga oo weydiinaya aqoonsi sidoo kale gaadiidka gudaha ka baaraya, waxa ayna Ciidamada AMISOM dhankooda yihiin kuwa u dhaga nugul baaritaanka ciidanka dowlada.
Baaritaankan lagu sameenayo gaadiidka Ciidamada AMISOM ayaa timid kadib markii ilo sirdoon laga soo xigtay in Al Shabaab qorsheenayaan in gaadiid ay ka qabsadeen Ciidamada AMISOM u adeegsadaan weeraro ay ku qaadaan xarumo muhiim ah oo Muqdisho kuyaala.
Amaanka Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde iyo xarunta Xalane ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana baaritaano adag la marsiinayaa gaadiidka xarumahaasi galaya ay ku jiraan kuwa AMISOM.
Gaadiidka ay wataan Ciidamada AMISOM ayaa markii hore si caadi ah u marayay wadooyinka magaalada Muqdisho, hasa ahaatee baaritaankan lagu sameenayo ayaa ka dhalatay cabsi dhinaca amaanka ah oo soo korortay
Previous articleC/Qaadir Warsame oo Goordhaw Muqdisho laga soo dejiyay isaga oo gacmaha ka xiran (Daawo Sawirro)
Next articleDaawo Sawirada: Dad ku dhintay Duqeyn Diyaaradeed ee ka dhacday Sh.Hoose oo lasoo bandhigay